Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Nepal » Nepal: Nrọ onye na -ese n'okporo ámá
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ gbasara Nepal • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
foto na Nepal
Trekking bụ ihe na -adọrọ mmasị na Nepal nke nwere njegharị ndị a ma ama dị ka Annapurna Circuit, Langtang na Everest Base Camp. Ịgagharị n'okporo ụzọ ndị a ma ama na -adọta ihe karịrị ndị ọbịa 150,000 kwa afọ na Nepal. Dị ka onye na -eme njem, ị nwere ike ịtụ anya na ka ị na -abanye n'ime obodo, ụmụaka niile ga -agba ọsọ na -achọ, "biko otu foto." Ọ masịrị ha nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị see foto ha wee gosi ha na ihuenyo LCD nke igwefoto gị. Mana ọ bụghị naanị ụmụaka nwere obi ụtọ ịnọ na foto gị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ na Nepal ga -amanye gị foto.
Nwanyị! Nwanyị! Otu foto, otu foto, biko.
Nepal bụ ọmarịcha ugwu ụwa, na-anya isi asatọ n'ime ugwu iri na anọ kachasị elu n'ụwa.
N'okpuru elu nke nnukwu ugwu Everest, ndị Nepali na -enwekarị obi ụtọ ka ị see foto ha.
Nke a na -ekwu nke ọma maka echiche ndị mmadụ gbasara ndị ọbịa na ikike ebumpụta ụwa nke na -akọwa ndị Nepal.
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị ịse foto ndị mmadụ ziri ezi, ihe owuwu ụlọ ma ọ bụ ọmarịcha okporo ụzọ, mgbe ahụ ị ga -ahụ ohere foto nke Nepal n'anya. Obodo mbụ Himalayan, ugbu a ochichi onye kwuo uche ya bụ ọkwa ụwa maka oke ugwu, na-anya isi asatọ n'ime ugwu iri na anọ kachasị elu n'ụwa gụnyere Ugwu Everest, nke kachasị elu n'ụwa. Mana gbadata site n'ịdị elu enwere ụwa nke nhọrọ foto dị ịtụnanya na pụrụ iche nke na -emegide foto nke nnukwu asatọ.
Ndị Nepal so na ndị kacha anabata mmadụ na ụwa ma nwee ọ happyụ na ị ga -ese foto ha, ọ bụrụhaala na ị gosiri ha na igwefoto gị, ha hụrụ nke ahụ n'anya. Gburugburu ụfọdụ ụlọ arụsị, ndị nsọ a maara dị ka Sadhu (mgbe ụfọdụ Saadhu) nwere ike ịrịọ maka ịkwụ 100 rupees, nke ya na otu dollar US ga -ewetara gị mana ndị nkịtị ị nwere ike izute n'okporo ụzọ nwere ike ọ gaghị ajụ gị ihe ọ bụla. . Ọ bụ naanị ihe kpatara na obodo ebe ọtụtụ afọ n'ọnụ ụzọ ụlọ egwuregwu Dashrath Rangasala, nke kacha nwee ọtụtụ egwuregwu na mba ahụ, enwere akara nke kwuru "Onye ọbịa bụ Chukwu" ma ọ bụ n'amaokwu Sanskrit, Atithi Devo Bhawa. Ọ na -ekwu ọtụtụ okwu gbasara ndị ọbịa na ikike ebumpụta ụwa nke na -akọwa ndị Nepal, na -eme Nepal bụ otu n'ime ebe “ndepụta ịwụ” kachasị.
Na mgbakwunye na ịse foto “ndị mmadụ”, enwere okporo ụzọ na Nepal nke pụrụ iche na pụrụ iche. Dịka onye na -ese foto na -arụ ọrụ na Nepal, anaghị m apụ ebe m ga -ese foto na ọbụlagodi mgbe ọtụtụ afọ na -ese foto Nepal oge ọ bụla m tụgharịrị n'akụkụ, ọ dị ka enwere ọnọdụ ọzọ na -eche ka ejide ya. Enwere ọtụtụ mkpọtụ na -eche ka achọpụtacha ha dị ka isi obodo Kathmandu ebe atụghị anya ya, na uto a na -atụghị anya ya, emeela ka ezigbo okporo ụzọ na -awagharị. Yabụ chajịa batrị gị, hazie kaadị igwefoto gị wee jikere maka ndị na -ese n'okporo ámá nrọ mezuru na Nepal.
Foto n'okporo ụzọ bụ ihe gbasara ịkpụ akpụkpọ anụ akpụkpọ ụkwụ na ịga ije, mana, n'agbanyeghị na ekwuru m na okporo ụzọ nwere ike gbanwee ngwa ngwa, ọ dịghị mkpa inwe nchegbu na ị nwere ike jiri obi ike pụta dị ka imirikiti ndị mmadụ na Nepal na -atụle. ọdịmma gị ka ọ bụrụ ọrụ dịịrị gị, ọbụlagodi na ha zutere gị. Ọtụtụ afọ gara aga otu nwa agbọghọ nọ n'ụlọ anyị chọpụtara mgbe otu elekere ma ọ bụ karịa ka ọ na -ejegharị na okirikiri, ọ gbagwojuru anya ụzọ nke ọ ga -aga iji rute n'ụlọ anyị. Ọ kpọrọ anyị na ekwentị mkpanaka ya na nwunye m, onye Nepali n'onwe ya, gwara ya ka ọ gaa ụlọ ahịa kacha nso nye onye ọ bụla nọ ebe ahụ ekwentị. Mgbe mkparịta ụka were nkeji ise onye ahịa ahụ mechiri ụlọ ahịa ahụ, tinye onye ọbịa ahụ na-enupụ isi n'azụ ọgba tum tum ya wee kpọga ya n'ọnụ ụzọ anyị. Nke ahụ bụ ụdị ọbịa ị ga -ahụ na Nepal. Ọ bụ ebe ndị mmadụ anaghị enye gị ntụzịaka, ha ga -ejegharị gị onwe gị ebe ị na -aga.
N'ime ọtụtụ ohere ịse foto na isi obodo Kathmandu, hụ na ị gara ahịa Asan, ebe ụlọ ahịa ndị obodo, Swayambhunath nke a na -akpọkarị '' ụlọ enwe '', Boudha Stupa, stupa ahụ mara mma wuru na narị afọ nke 14 ma gosipụta n'ọtụtụ mgbasa ozi njem. maka Nepal, na n'ezie Pashupati, aha a na -akpọkarị Pashupatinath Temple, otu n'ime ụlọ nsọ Hindu kacha mkpa na South Asia. Ebe ndị a niile na -enye ohere maka onye na -ese foto na -ejegharị ejegharị. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eme njem nlegharị anya nke ga -ahazi njem nlegharị anya n'okporo ụzọ, ma ọ bụ naanị ị nwere ike were maapụ wee pụọ n'onwe gị. Kathmandu bụ obodo juputara n'ọdịbendị na ọdịdị dị iche na ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa na enwere ohere na -akparaghị ókè n'ezie maka ịse foto ebe ahụ, yana n'ezoghị ọnụ na Nepal niile site na elu Everest ruo Terai, ala dị larịị nke Nepal ebe ebe Buddha mụrụ.
Otu onye na -ese foto kwuru maka ịse foto n'okporo ụzọ na Nepal na ọ bụ “Chaotically Cool” na nke ahụ bụ nkọwa dabara adaba nke otu n'ime ebe pụrụ iche fọdụụrụ n'ụwa.